Kushambadzira Kwenyika Kuitwa Nyore | Indianapolis Webhu Dhizaini
Mugovera, Mbudzi 9, 2013 Chitatu, Kukadzi 9, 2022 Lorraine Bhora
Inguva apo iwe paunofunga iwe uine mubato pane ino internet kushambadzira zvinhu, nyowani buzz nzvimbo. Parizvino, Inbound Marketing iri kuita kutenderera. Wese munhu arikutaura nezvazvo, asi chii icho, unotanga sei, uye maturusi api aunoda? Kushambadzira kuri mukati kunotanga neruzivo rwemahara, rwunopihwa kuburikidza nemikana yemagariro, kutsvaga, kana kushambadzira kwakabhadharwa. Chinangwa ndechekumutsa kuda kuziva kwetarisiro uye kuita kuti vatengese yavo email, uye pamwe nhamba yefoni, yezvako zvemukati.
wako anotarisira mutengi ari kurwisana naye. Mhinduro yako inoda kuvapa ruzivo rwakakwana, (pasina kutengesa zvakanyanya) ratidza hunyanzvi hwako.
Gadzira zvirimo - Kurodha pasi kunouya mumhando dzose uye hukuru hunosanganisira mabhuku ebasa uye zvinyorwa zvekutarisa, ebook, mavhidhiyo, maodhiyo faira kana maspredishiti Hazvidi kuti ive yakareba kwazvo kana yakaoma, asi ruzivo rwakakwana saka tarisiro yakakomba ichakurudzirwa kubvunza rumwe ruzivo nezve izvo zvinhu zvaunonyatso do tengesa nemari.
Iyo Yekumhara Peji Yese yako yekusimudzira yekunze inomhanyisa traffic kune ino peji. Inogona kunge iri peji pawebhusaiti yako, chinyorwa cheblog pane yakatarwa uye ine chekuita nenyaya, kana peji yekumhara ine chinangwa chimwe chete: kuita kuti vanhu vatengese maemail avo nezvezvako Kuve neiyo yakasarudzika URL yemushandirapamwe kunokubvumira kuyera. kushanda kwematanho ekushambadzira ega uye kuti kutendeuka kwako kwakasimba sei. Kuvaka mapeji ekumhara, isu tinonyatsoda iyo Premise plugin yewordpress yakasanganiswa formstack yekutora data.
Iye Anopindura Anopindura Haasi munhu wese anotora ruzivo rwako nhasi akagadzirira kutenga. Hazvireve kuti havazotenge pasi pemugwagwa. Zano rako rinofanira kusanganisira akateedzana ekubata kuti uwane mibairo yenguva refu. Isu tinoshandisa iyo autoreponder ficha mu formstack kutumira email, iyo inongoratidzika seyako wega katsamba zuva kana maviri mushure mekutanga kurodha pasi. Aya manotsi anowanzo gadzira hurukuro, mhinduro uye zvikumbiro kuti uwane rumwe ruzivo. Isu tinodawo Constant Contact sehwaro hwekudonha kwenguva refu mushandirapamwe.
Tyaira Traffic ine Chirongwa Chekusimudzira. Vanhu havafanirwe kuwana yako yekumhara peji netsaona. Goverana zvinongedzo pamapuratifomu enharaunda. Izvo zvakanaka kukumbira shamwari neshamwari dzekudyidzana kuti vagovane chinongedzo kunharaunda yavo kana iwe uchida kuvaitira zvakafanana. (Uye iwe unofanirwa kuve). Kana iwe uine yakajairwa email chirongwa Sanganisira iyo link ipapo futi. Izvi zvinogona kukubatsira iwe kuwana zvakakomba tarisiro mune yako data base. Usakundise vashanyi kuwebhusaiti yako nesarudzo dzakawandisa, asi kuwedzera imwe yekufona kuti iitwe mutsoka, misoro kana padivi bar inotyaira tarisiro inofarira kune yako peji yekumhara. Iwe unofanirwa here kushandisa PPC kutyaira traffic kune yako kumhara peji? Izvo zvinoenderana nekutengesa kwako maitiro. Kana iwe uine chaiyo nzira yekushandura causal macomputer kune vatengi saka iko kudyara mukushambadzira kunogona kubhadhara. Usashandise PPC kuvaka ruzivo rwemhando.
Kubata kwega. Maitikiro anoita anovhura musuwo, asi kana iwe uchida chaiyo yekutengesa mhedzisiro unofanirwa kutora foni utaure kune tarisiro. Vakaona here kuti ruzivo rwacho rwaibatsira? Vane mimwe mibvunzo here.
Tags: inbound Marketingpepa rekushambadzira repakatidenderedzwabepa rekushandira
Nov 16, 2013 na1:24 PM
Chinyorwa chakanaka. Ndakaita kuti ndifarire zvakakwana kuti nditarise iyo webinar.
Handisi munhu anoda kutungamira kunotonhora, uyo asati akuziva, kuti akupe nhamba yefoni kuti uwane pepa rekushanda. Ndakabaya bhatani rekumashure pakarepo. Handikuzivi zvakakwana, uye haundizivi zvakakwana. Hapana mumwe wedu anofanira kunge achifarira kutaura parunhare izvozvi.
Nekero yangu ye email, iwe ungadai wakaenderera mberi nekubatana, wakandikoka kune replay kana ndisina kuzviita, nezvimwewo, nezvimwewo. Pandakagadzirira kukubvumira kuti undishevedze, zvingadai zvakave nokuti ndakanga ndiri munhu anofarira tarisiro. . Ini ndiri fan wenhamba dzenhare kare chaizvo kana sarudzo yenguva ipfupi, sekutenga mota. Zvakadaro handaizobvunza kusvika peji reMazvita, saka ini ndine kero yeemail kutanga.
Nov 17, 2013 na8:32 AM
Takakavadzana zvakanyanya mukati nezve zvakanakira nekuipira kwenhamba dzenhare. Isu takaita shanduko sebvunzo uye takaona mhedzisiro iine yakanaka. Isu tine vashoma vanokwanisa tarisiro yekudhawunirodha fomu.
Kunyange ini ndisingakurudzire zano iro kune wese mutengi, rinotiitira isu
Nov 16, 2013 na1:27 PM
Iyo 'tarisa semina yedu' link inonditora kune Constant Contact login peji?